Sniper lalao an-tserasera - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Mahaliana fa ny sniper, ny fiantsoana, ny asa na ny asa? Manana lalao an-tserasera Sniper, ary samy zazalahy mety mahatsiaro ho toy ny shooter. Raha tsy misy ny olona toy izany dia tsy afaka atao any amin'ny ady, na mampidi-doza iraka mba hisambotra ny mpanao heloka bevava. Ireo asa sy ny ala nenina politika na olona tsotra mahery raha hiteny an-kalamanjana. Ary ny mpitily eo amin'ny an-tampony mandry eo imason'ny mijery ny vahoaka. Ianao izao dia afaka milalao ny maimaim-poana, mba hianatra ny andraikitra. Tokony hanana faharetana sy ny fitandremana mba tsy ho hita masiaka singa.
Classical Rabbit Sniper Classical 2019
Classical Hunting Classical
Sniper an'ny tafika manokana
Mitifitra ny Sniper
Sniper tonga lafatra 3d
Andriamatoa Spy 3D
Mitandrema ny tanjona 2
Duck Tight Danger
Mitandrema ny tanjona
Stickman sniper: Peho hamono
Mitifitra ilay Watermelon
Fandram-bidy Hippo klasika
Mpanazatra Jurassic Pterosaur
Mijoroa ho Hunter
Sniper Mission manafaka ireo takalon'aina
Lalao Sharpshooter tamin'ny Category:
Farany Sniper lalao
Lalao Sniper Survival Squidy aterineto
Kisary fitifirana korontana
Mpamaly faty Sniper Trigger
Ny kaody sniper
Lalao Online Rehetra Sniper lalao an-tserasera
ato amin'ity fizarana ity ianao tonga soa Shooting sniper lalao an-tserasera. Mba hahazoana izany asa miaramila, tsy maintsy ho tena marina shooter, ary manana faharetana tsara. Indray mandeha eo amin'ny asa, ho voaomana ho ela miafina, miandry ny farany. Izany mety ho ora maromaro, ary ny sniper tsy maintsy ho mihetsika rehetra izany fotoana izany, mba tsy hanome avy ny toerana.
mpanohitra koa ny mpitily, ka dia tsara combing ny faritra mba mamantatra ny fahavalo. Ny ambony ny fampiofanana, ny lehibe kokoa ny ho tafavoaka velona.
Ny ady, ny sniper, raha foana ny toerana inconspicuous, dia tsy maintsy manana tanjona haingana haka amin'ny fahavalo, ary mitifitra azy ireo tsirairay. Fa mitifitra avy amin'ny toerana iray, dia manambara ny tenany, fa tsy mba ho fanalana azy ny fahavalo ny tànany, dia ilaina indraindray hifindra, niafina tao ambadiky ny fonony vaovao.
Sniper tsy mampiasa basy na milina basy. Mitaky avo-fametrahana mazava tsara telescopic basy amin'ny fahitana. Raha jerena amin'ny peephole, dia manatona ny zavatra, ary mahita azy ao an-lehibe kokoa haben'ny, izay manamora ny asa ny fandringanana.
Sehatra ampiharana ny zana-tsipìka
Ireo matihanina ireo mankasitraka foana, na dia fiadanana na ady.
Ary tamin'ny fiadiana, ny fahafahana, mba hanalana sarona ny fahavalo mpitifitra sniper afaka mamonjy ny ain'ny voina rehetra.
Ary tamin'ny olom-pirenena ny asa mampiasa amin'ny tranga scrupulous kokoa. Toy ny fitsipika, dia singa mpanao heloka bevava, izay mpamono ny herisetra manakarama olona tsy ilaina - matetika ny mpanao politika na ny raharaham-barotra mpifaninana.
izy ireo nokaramaina mba hiarovana ny Filoha sy ny toetra ambony mandritra ny fotoana nisehoany tamin'ny vahoaka.
Indraindray misy toe-javatra, rehefa olom-pirenena tsotra fotsiny lasa adala eo ambany ny tsindry ny toe-javatra, ary ho lasa sniper eo amin'ny sitrapony manokana. Ao amin'ny solosaina izao tontolo izao, mpandraharaha kilalao nikapoka ity toe-javatra, ary nivadika ho mpamono olona dia tena milamina sy mahazatra mpandray anjara tao amin'ny tantara an-tsary.
famonoana Games amin'ny sariitatra litera
, ohatra, ny mpamono nanokatra ny mihaza Masyanya. Fa ny olona afaka mahatakatra. Fantany izay matetika excrete pretzel ankizivavy io, dia mora ny maminavina fa indray andro any hisy ny olona fa izy dopeklo ny antics.
Ny miaramila tetika afa-po
Fa aoka isika hiverina any amin'ny tafika lohahevitra, izay matetika no nilalao ny tantara ny lalao an-tserasera sniper ary mifandray aminy. Mandry ao amin'ny fialofana, tsy maintsy manala ny fahavalo mpandefa zana manerana ny faritany sy ny hamela ny Squad mba handrava ny alalan 'ny fiarovana sy ny miditra any faritra vaovao. Tsy ny asa tsotra, noho aoriana ianao, koa, dia tena mihaza. Afa-tsy ny fahaizana sy ny marina no hilaza iza no iza. Raha toa ianao ka nanakarama ny sniper, ianao mihazakazaka be ny vola, satria ny ady - izany foana antenaina ny fahafatesana, fa ny mety dia tsy maintsy ho toa antony.
akanjo lava mpamono
Indraindray ny ady tany ity no anjara asan'ny vehivavy mihitsy aza. Nahoana no tsy? Ao amin'ny andraikitry ny herim-po Nastia tsy maintsy panaon'Andriamanitra ny fahavalo rehetra. Dia efa lasa nalaza noho ny fahaiza-manao sy ny tolotra nivarotra ankehitriny toy ny mofo mafana. Mifidiana ny fitaovam-piadiana, fa mitandrema, satria ianao hiady aminy izy. Nankao anaty sambo hanao asa fitoriana, ka mialà mikendry manokana lasibatra. Raha vao ny toerana efa rava, ianao hiala amin'ny toerany. Taorian'ny asa fitoriana vita azonao manaraka, ary toy izany isaky ny. Raha ny marina mahomby, ny isa dia Mitete valisoa mendrika.
no nilalao tamin'ny sariitatra litera na tena ny olona toy ny endri-tsoratra, lalao sniper mitaky foana ny iray - dia marksman ka tsy hamela ny olona izay fanantenana ho anao. Fitadiavana dia nihaona ihany, raha ny fahavalo no rava ary ianareo dia velona.